KB Jabiyaha Taxanaha H-Nooca
Nidaamka ilaalinta rasaasta maran si loo ilaaliyo qaybaha marka jabiyaha la eryo maran
Qalabka Gawaarida Gawaarida & daboolka ilaalinta
Qalabka waalka ee wareegga & daboolka ilaalinta
Xakamaynta sawaxanka iyadoo la adeegsanayo qaab aad loo aamusiyay
Ka-hortagga go'itaanka ee pin pin by qaab-dhismeedka aan muuqan ee pin qalab
Tiknoolajiyad weyn oo lagu daray naqshad wanaagsan
Noocyada 'KB Breaker V-type
Xakamaynta fudud iyo meelaynta fudud waxay ka dhigeysaa mid ku habboon shaqada qodista.
Iyadoo aan lahayn culeys dhinac ah, yareynta heerka jeexitaanka qalabka.
Wadarta-dherer dheer iyo wadarta culeyska culus, oo ku habboon dhismaha wax dumiya.
Noocyada 'KB Breaker S-type'
Heer buuq oo hooseeya, oo ku habboon meel deggan iyo shaqooyinka magaalada.
Qeybta buuxda ee xiran waxay ilaalisaa jirka-weyn.
Taxanaha Jabinta H-nooca
Taxanaha jabiyaha T-V nooca
Nooca TOR Jabiyaha S-nooca
1, Qabsashada alwaax farsamo: Waxaa wada qalabka silsiladda baaldiga qodda, iyada oo aan lahayn baloogyo dheeri ah iyo dhuumaha;
2, 360 ° Wareeg alwaax ah oo qashin qub ah: ubaahan in lagu daro laba nooc oo ah baloogyada korontada ku shaqeeya iyo dhuumaha dusha sare ka qodda si loo xakameeyo;
3, Qabsashada qoryaha hawo-xireenka aan wareegin: Waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro xirmo ka kooban hawo-biyoodyo iyo hawo-qaadayaal qodista si loo xakameeyo.
Waxay ku habboon tahay jawi shaqo oo kala duwan. Looma isticmaali karo oo keliya howlaha duminta, sida duminta dhirta kiimikada, makiinadaha birta iyo aqoon isweydaarsiga qaab dhismeedka, laakiin sidoo kale dib u soo kabashada walxaha la taaban karo. Waa qalab ku habboon duminta. Astaamihiisu waa sahlanaansho iyo karti sare. Marka qashinka dib loo warshadeeyo oo la jajabiyo, qaybo waaweyn oo duug ah ayaa la gooyaa oo la baakadeeyaa, taas oo si weyn u wanaajinaysa waxtarka shaqada kana ilaalineysa welwelka shaqada. Waxay ku habboon tahay xarumaha dib-u-warshadaynta qashinka waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo hawlgallada duminta ee dawladda hoose.
Waa aalad dhammaadka hore ee qodista oo lagu rakibay qodista, iyadoo la kaashanayo awoodda ay bixiso qodista, iyada oo loo marayo isku dhafka daanka la dhaqaajin karo iyo daanka go'an ee qalabka wax lagu burburiyo si loo gaaro saameynta burburka shubka . Waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha duminta iyo qashinka warshadaha. munaasabad.
Xirmooyinka wax lagu burburiyo waxay ka kooban yihiin xirmooyin jir, dhululubbo hidde ah, daan dhaqaaq iyo daamanka oo go'an. Jirka faashaddu wuxuu ka kooban yahay ilkaha daanka, garbaha, iyo ilkaha caadiga ah. Waxaa lagu rakibay qodista wuxuuna ka tirsan yahay lifaaqa qodista.
Hilqado burbursan ayaa hadda si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha duminta . Inta lagu guda jiro howsha duminta, waxaa lagu rakibay qodista si loo isticmaalo, sidaa darteed waxaa loo baahan yahay hal howl wadeen oo ka mid ah qodista.
Gololalka duugga ah waxaa lagu rakibay qashin qubka waxayna ku habboon yihiin jawiyo kala duwan oo laga shaqeeyo. Waxaa loo isticmaali karaa howlaha duminta, sida duminta dhirta kiimikada, dhirta birta ah iyo aqoon isweydaarsiyada qaab dhismeedka biraha, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa dib u warshadaynta walxaha shubka ah. Waa qalab burburin kaamil ah. Astaamaheeda waa badbaado, sahlanaan iyo karti sare. Iskaraab ayaa dib loo warshadeeyey oo la jarjaray halka qaybo waaweyn oo duug ah la gooyey oo la baakadeeyey, taas oo si weyn u wanaajinaysa waxtarka shaqada kana ilaalineysa welwelka amniga gacanta. Waxay ku habboon tahay xarumaha dib-u-warshadaynta qashinka waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo hawlgallada duminta ee dawladda hoose.
Qalabaynta gariirka waa nooc ka mid ah qalabka shaqada ee kaabayaasha ah ee mashiinnada dhismaha, loo isticmaalo waddada, degmada, isgaarsiinta, gaaska, bixinta biyaha, tareenka iyo waaxaha kale si loo jajabiyo aasaaska injineernimada iyo qashin buuxinta. Waxay inta badan ku habboon tahay isku-dhejinta qalabka leh adhesion hooseeya iyo khilaaf u dhexeeya walxaha, sida ciidda webiga, quruurux iyo laami. Dhumucda lakabka garaacista gariirka waa mid weyn, heerka digriiguna wuxuu buuxin karaa shuruudaha aasaaska darajada sare sida xawaareyaasha waaweyn.
Nooca Aamusnaanta ee Jabiyaha, Burburin Waayo, Excavator, Qulqulka Qashinka, Xakamee Walxaha Wixii Jabiyaha, Hb Jebiyaha Taxanaha, Shear For Excavator,